Best 10 × 10 Yakazara Ruvara Rakadhindwa Kushambadzira Tende Kugadzira uye Fekitori | Jesson Mureza Arts & Crafts
Professional Ratidza Solution, Yemhando Canopy Tende
CFM yakatsaurirwa kupa yakanakisa hunyanzvi uye premium mhando canopy matende ane maitiro ekugadzirisa. Tinoedza zvese zvatinogona kuti tione kuti vatengi vanowana yakakodzera kwazvo kuratidza tende yezviitiko zvavo zvemukati nekunze.
Sarudza iyo 10x10 canopy tent, chimwe chezvinhu zvedu zvinozivikanwa zvigadzirwa, makambani anowana chishambadziro chishandiso chakagadzirirwa kureruka kwekushandisa uye mibairo mikuru. Iyo inowanzo shandiswa mukusimudzira kwechigadzirwa senge mune yekushambadzira show kana kuratidzira. Izvo zvine hunyanzvi, zvakadaro, uye zvinoshanda mushe mune chero mamiriro ezvinhu.
Yakasimba, Yakareba Yakareba uye Inokwezva Ekushambadzira Matende
Yedu tsika promo canopy chishandiso chakasimba chekushambadzira. Paunoshandisa matende edu etsika, unowana kugona kuamisa nekuaisa kwaunoda. Iyo micheka yakakosha yatinoshandisa yakanyanyisa kudzora, inopa UV kudzivirirwa, uye haina mvura. Izvi zvinobvumidza kuzara kwemukati nekunze kwevashandisi.
Yakazara Ruvara Dhayi-Yakasarudzika, Yakajeka uye Inopenya Ruvara
Imwe yeakanakisa maficha eiyo 10 * 10 pop up canopy tende ndeye ayo akasarudzika ekushambadzira maficha. Kana zvasvika kumatende ekusimudzira, aya anomira pachena. Iwo matende ekushambadzira atinopa anotendera logo kana kudhinda sirogani. Aya matende anoshanda nemazvo kune anowanzo shandiswa dhayi sublimation, iyo inovimbisa yakajeka uye yakajeka mifananidzo yakadhindwa.
Sarudzo dzakasiyana siyana kuti uwane Zvaunoda
Kune ino tende rekushambadzira yechiitiko che10x10ft, tinopa matatu marudzi emafuremu etende, sikweya aluminium 31mm chubhu, hex aluminium 40mm chubhu uye hex aluminium 50mm chubhu. 31mm mativi matende furemu uye 40mm hex tende furemu iri kuwedzera bhajeti-kuchengetedza, uye iyo 50mm hex tende furemu iri rinorema basa uye nekushandisa kwenguva refu.
Kunze kwemafuremu anorema emabasa, isu tinopawo akateedzana zvishongedzo, kunge saga rejecha, tambo uye yepasi spike, kukubatsira iwe kusimudzira kugadzikana kwenzvimbo yako yekuratidzira mune imwe mhepo ine mhepo.
Tende Mureza Gomo Kubata
Tambo & Ground Spike
Isingaenzaniswi Match Kudhinda Service
CFM inopa yakasarudzika yakadhindwa canopy tende pamwe neyakajairika-saizi iwo. Isu takaunganidza angangoita ese mafirita etende e10x10ft, 10x15ft uye 10x20ft. Tipei saizi yefuremu yako uye isu tinogona kubatsira kugadzirisa kumusoro kwetende kuti ifanane nayo.
Mubvunzo: Ruvara rwehemi runogona kuenderana here neruvara rwetende?
A: Ehe, isu tinosarudza iwo-iwo-mavara hems zvinoenderana nevhu repasi petende.
Mubvunzo: Unogona here kugadzira denga kana rakazara madziro muchidimbu chimwe?
A: Kufuridzirwa neyakaganhurirwa saizi yemicheka, isu tichaita zvidimbu zviviri kusona pamwechete zvine hunyanzvi uye zvisina musono kuti tione kubatana kwakabatana uye akakwana marogo.
Mubvunzo: Ungachengetedza sei kugadzikana kwetende mukushandisa kwekunze?
A: Nzira nhatu dzekuwedzera kugadzikana dzinowanikwa pane yako sarudzo.
l Mhepo simbi nesaga
k Adjustable bhakoro pamwe webbing
l Velcros ine sandbag
Mubvunzo: Ungadzivirira sei kubuda kwemvura mukushandisa kwekunze?
A: Tichashandisa anopisa ematepi emhepo mune ese seam mitsetse kudzivirira kubuda.
Mubvunzo: Ungachenesa sei tende?
A: Tichifunga nezve kupfeka pamucheka, zvirinani usashandise chinosuka. Kupukuta nzvimbo dzakasviba nesipo nyoro isarudzo yakanaka.
Mubvunzo: Unogona here kugadzirisa kudhinda kuti ifananidze Hardware yangu?
A: Ehe, chero uine kupi kwaunowana yako yekuratidzira Hardware uye zvisinei kuti ndeupi rudzi rwekuratidzira Hardware iwe unayo, isu tinokwanisa kupurinda chaiwo magiraidhi kuenderana nayo.
Mubvunzo: Unorongedza sei iyo tende graphic uye Hardware?
A: Kazhinji, isu tinorongedza iyo tende graphic, Hardware, uye vhiri package zvakasiyana kuti tidzivise kukuvara kwemavhiri mukutakura.
10x15 Canopy Tende